राष्ट्रपति कार्यालयमा फोटो पत्रकारलाई छिर्न निषेध ! विज्ञप्ति निकालेर विराेध « News24 : Premium News Channel
राष्ट्रपति कार्यालयमा फोटो पत्रकारलाई छिर्न निषेध ! विज्ञप्ति निकालेर विराेध
राष्ट्रपति कार्यालय सितलनिवासमा फोटो पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । अपरान्ह ४ बजे नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रमको फोटो खिच्न गएका पत्रकारलाई कार्यक्रम स्थल जान प्रहरीले रोक लगाएको हो ।
सो कार्यक्रमको नीजि सञ्चारगृहका पत्रकारलाई प्रवेश गर्न निषेध गरेपछि फोटो पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । अहिले राष्ट्रपति भवनको गेटमा क्यामेरा डाउन गरी विरोध गरिरहेका छन् । कार्यक्रममा सरकारी सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई भने प्रवेश खुल्ला गरिएको छ । त्यस्तै, पत्रकारलार्इ प्रवेश गर्न नदिएकाे विषयलार्इ लिएर फोटो पत्रकार क्लब, नेपाल (पिजे क्लब)ले अापत्ति जनाएकाे छ । विज्ञप्ति नै निकालेर विराेध गरहेकाे हाे । नयाँ पत्रिकाबाट
पिजे क्लबकाे विज्ञप्ति यस्ताे छ :
मितिः २०७४ माघ ५ गते
नब नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा शुक्रबार निजी सञ्चार माध्यमका फोटो पत्रकार र क्यामरा पर्सनलाई प्रवेश निधेष गरिएको प्रति फोटो पत्रकार क्लब, नेपाल (पिजे क्लब)को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
समाचार संकलनको लागि शीतल निवास पुगेका फोटो पत्रकारहरुलाई गेटमा रोकिनु दर्भाग्यपूर्ण हो । संविधान कार्यान्वयको प्रमुख अंगको रुपमा रहेको प्रदेश प्रमुखहरुको सपथमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश निषेध गरिनु संविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रणमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।
संविधानको संरक्षकको कार्यालयबाटै प्रेसमाथि भएको यस किसीमका रोक यसअघि पनि पटक पटक भएको यहाँ स्मरण गराउँछौं । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि पत्रकारलाई रोक्ने क्रम जारी नै छ, जसको पिजे क्लब घोर भत्र्सना गर्दछ ।
लोकतन्त्रमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रमको समाचार संकलन र तस्बिर खिच्न रोक लागाइनु दुःखद र निन्दनिय कार्य भएको पिजे क्लबको ठहर छ । पटक पटकको आग्रहलाई वेवास्ता र संवैधानिक हक तथा अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेकोले पिजे क्लब आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई यस विषयमा सम्बोधन नभएसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा राष्ट्रपतिका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको तस्बिर संकलन तथा सम्प्रेषण नगर्न निर्देशन गर्दछ । साथै सम्पूर्ण निजी सञ्चार माध्यमहरुले पनि पिजे क्लबको कदमलाई साथ दिने छन् भन्ने अपेक्षासहित आग्रह गर्दछ ।
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव
काठमाडौँं । पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका सरुवा रोग फैलिन सक्नेतर्फ